सिल्भिया ब्लान्चको अन्तिम गर्मी, लोरेना फ्रान्कोको अपराध उपन्यास | वर्तमान साहित्य
सिल्भिया ब्लान्चको अन्तिम गर्मी स्पेनिश लेखक लोरेना फ्रान्कोको अपराध उपन्यास हो। यो २०२० मा प्रकाशित भयो र अभिनेत्री र लेखकको अन्तिम पुस्तकहरू मध्ये एक हो। शीर्षकको मुख्य कथानक भनेको सिल्भिया ब्लान्चको बेपत्ता हुनु हो। निस्सन्देह, यो रहस्यले भरिएको एक रमाईलो कथा हो, जसमा केही, तर चाखलाग्दो पात्रहरू जीवनमा ल्याउँदछन्।
लोरेना फ्रान्कोले अमेरिकी लेआ रबर्ट्सको बेपत्ता पार्दै आधारित कथा बनाएको कुरा स्वीकार्योजुन मार्च २००० मा भएको थियो। फ्रान्कोले उनको उपन्यासमा यस घटनाका केही विवरणहरू थप गरे जस्तै राजमार्गमा सिल्भिया - लेआ जस्तो बेपत्ता हुनु। त्यहाँ उसको गाडी मात्र फेला पर्‍यो जसको कुनै पहिचान वा उसको ठाउको सुराकी बिना, अहिलेसम्म रहस्य छ भन्ने तथ्य।
1.2 लौरा फ्रान्को द्वारा पुस्तकहरु
2 सिल्भिया ब्लान्चको अन्तिम गर्मी
2.2 समयमा जम्पहरू
2.3.1 सिल्भिया हेर्न अन्तिम व्यक्ति
2.3.2 प्रधान संदिग्ध
2.3.3 अलेजेन्ड्रा, पत्रकार
लोरेना फ्रान्को बार्सिलोनाका स्थानीय हुन्, उनी १ 1983 .XNUMX मा जन्मेकी थिइन्। उनले नाटकीय कलामा अध्ययन गरेका छन् जुन उनले प्रख्यात न्यान्सी ट्यून थिएटर स्कूलमा गरे। फ्रान्कोले टिभीमा र स्पेनिश सिनेमामा अभिनेत्रीको रूपमा सफल क्यारियर निर्माण गरेको छ, जस्तै फिल्महरू: मुटुको धडकन, ईश्लेम y The Heimlich युद्धाभ्यास। उनको नवीनतम फिल्म सफलता नायकको रूपमा छ पहाड़गंज (बलिउड)
लोरेना फ्रान्कोले पत्रहरू मार्फत उनको प्रकाशनलाई स्व-प्रकाशन प्रयोग गरेर उनको कामहरू प्रचार गर्नका लागि विशेषता बनाईएको छ। अवश्य पनि, प्रस्तुतीकरणको लागि प्लेटफर्म अरू कुनै पनि होइन अमेजन। उनको पहिलो प्रस्तुत काम थियो दुई आत्माको कथा (2015)। त्यसोभए, २०१ 2016 मा उनले कुल १० थप पुस्तकहरू प्रस्तुत गरे जसमध्ये निम्न पुस्तकहरू बाहिर रहेका छन्: खुशी जीवन, शब्दहरू, के समय बिर्सनुभयो y यो टस्कनीमा भयो (नम्बर १ बिक्रीको लागि Amazon).
सेप्टेम्बर २०१ In मा, उनले पुस्तक प्रस्तुत गरे जसले उनलाई उच्च मान्यता प्रदान गर्‍यो: समय यात्री यस उपन्यास, रोमान्टिक overtones र विज्ञान कल्पना संग, देशी र अन्तर्राष्ट्रिय दुबै डिजिटल प्रारूप मा बिक्री मा नम्बर १ भएको छ। यो कामको साथ लेखक सुरु भयो समय त्रयी, जुन उपन्यासहरू द्वारा पूरित छ: समयमा हरायो (2018) र समयको स्मृति (2018)।
लौरा फ्रान्को द्वारा पुस्तकहरु
दुई आत्माको कथा (डिसेम्बर, २०१ 2015)
खुशी जीवन (फेब्रुअरी, २०१ 2016)
के समय बिर्सनुभयो (मार्च, २०१))
जीवन मैले छानेको छैन (अप्रिल, २०१))
मसँग बस (अप्रिल, २०१))
मेरो दिन मर्लिन संग (मे, २०१))
शब्दहरू (मे, २०१))
जहाँ विस्मृति बस्दछ (जून, २०१))
बर्बाद घण्टा (अगस्ट, २०१ 2016)
यो टस्कनीमा भयो (अक्टुबर, २०१))
उनीलाई यो थाहा छ (जून, २०१))
समय यात्री (2016 / 2017)
समयमा हरायो (मार्च, २०१))
मध्यरात्रि क्लब (जुलाई, २०१))
समयको स्मृति (नोभेम्बर, २०१))
कसले तारहरू तान्दछ (जनवरी, २०१))
अन्ना गुइराओ को सत्यता (मार्च, २०१))
सिल्भिया ब्लान्चको अन्तिम गर्मी (फेब्रुअरी, २०१ 2020)
सबैजना नोरा रोयको खोजी गर्दैछ (मार्च, २०१))
लोरेना फ्रान्को शुरू देखि अन्त सम्म रहस्य र रहस्य पूर्ण 300 भन्दा बढी पृष्ठ को एक थ्रिलर प्रस्तुत गर्दछ। कथा बार्सिलोनाको सानो शहर मोन्टसेनीमा सेट गरिएको छ। पुस्तकमा त्यहाँ कुनै गन्ती नगरी छोटो अध्यायहरू हुनेछन्, ती प्रत्येकको सुरुमा मिति र नायकको नाम हुन्छ, जो कथनको जिम्मामा छ पहिलो व्यक्तिमा बिच्छेद।
२०२० अन्त्य, लेखकले उनको सामाजिक नेटवर्कमा साझेदारी गरे जेटा स्टूडियो यसको अडियोभिजुअल अधिकारहरू अधिग्रहण गर्‍यो कालो उपन्यास. यो प्रतिष्ठित उत्पादन कम्पनी आफ्नो सफल प्रोजेक्टहरूको लागि मान्यता हो, तीमध्ये श्रृंखलाहरू कुलीन वा चलचित्रहरू: तीन मिटर आकाश माथि, म तिमीलाई चाहन्छु y सुपरलोपेज।
उपन्यास २०१ 2018 मा शुरू हुन्छ, त्यो ग्रीष्मको एक वर्ष पछि जब सिल्भिया ब्लान्च गायब भयो। पत्रकार अलेजेन्ड्रा दुआर्ते रहस्यमय त्रासदीको स्मारक समीक्षा गर्ने जिम्मामा छन्। एलेक्स - यस युवा रिपोर्टर को रूप मा परिचित छ - आफ्नो प्रियजनहरु र गाउँलेहरु लाई के भयो साक्षात्कार गर्न सिल्भिया गृहनगर मा यात्रा गर्नु पर्छ।
मोन्टसेनी एउटा शान्त शहर हो जहाँ सिल्भिया आफ्नो परिवारसँग बस्छिन् उनी बेपत्ता पारिएसम्म, यसैले यसका सबै बासिन्दाहरूलाई यो थाहा थियो। उनी ब्लान्च परिवारको कान्छी थिइन, एक बुद्धिमान र धेरै आत्मविश्वासी युवती, जसले आफ्नो नयाँ जागिरमा सफल भविष्य र वर्षौंको विवाहपूर्व भेटघाट गरी।
को अन्तिम गर्मी ...
सिल्भिया ब्लान्चको अन्तिम गर्मी २०१ 2017 मा शुरू हुन्छ, केटीको हराएको घटनालाई वर्णन गर्दै। त्यसो भए यो एक बर्ष पछि राखिन्छजब एलेक्सलाई उक्त घटनाको समीक्षा तोकिन्छ। जब पात्रहरूले कथा वर्णन गर्छन्, विगतमा यात्रा गर्नुहोस्, दुबै बेपत्ता हुनु अघि, र जब घटनाहरूले दुर्भाग्य निम्त्याउँदछ।
साथै, कथानक पनि २०२० सम्म विकसित हुन्छ। त्यहाँ एलेक्सको जीवन अनुसन्धान पछि देखाईन्छ र त्यसपछिको प्रकाशन कार्य सम्पन्न गरियो।
ईतिहासमा, लोरेन फ्रान्को धेरै राम्रा क्रिप्टेड वर्णहरू सुविधाहरू। तिनीहरूको संयुक्त कार्यहरू सिमलेस बिच्छे, जसले उपन्यासलाई दृढता दिन्छ। कथा मा उपस्थित रहस्यहरु विभिन्न दृष्टिकोण र अप्रत्याशित मोड़ दिइरहेका छन् कि पाठकलाई पक्रन जब सम्म तिनीहरूले उसलाई अचम्मको अन्त सम्म नदेखाईन्। ती मध्ये ती बाहिर आउँछन्
सिल्भिया हेर्न अन्तिम व्यक्ति
यस चाखलाग्दो कथाको पहिलो अध्याय एउटी आइमाईले वर्णन गरिन्, जसले मोन्टसेनीको गाडीमा उनको गाडी चलाउँछिन्। उनलाई क्यान्सर भएको डरलाग्दो समाचार पाउँदा उनी छक्क परिन्। आफ्नो बाटोमा, दूरीमा उसले ब्ल्यान्चको गाडीलाई भिजुअलाइज गर्न र पहिचान गर्न प्रबन्ध गर्दछ; जब ऊ कारबाट जोगिन अलि रोक्छ, उसले ज forest्गलमा दुईवटा सिल्हूटहरू देख्छ, र उसले सिल्भिया र यान हो भनेर अनुमान गर्छ - उसको जीवनभर प्रेमी।
उनी परिस्थितिलाई महत्त्व दिई आफ्नो बाटोमा लागिरहेकी छिन्, किनभने उनी सोच्थिन् कि यो दुई युवा मानिसहरु बीचको प्रेम सम्बन्ध हो। त्यो दृश्य पछि, महिलाले उनको दुखी वास्तविकतामा ध्यान केन्द्रित गरे।
पुलिसले साक्षात्कार गरेको पहिलो व्यक्ति मुख्य श suspect्काको रूपमा जान, सिल्भियाका प्रेमी थिए। एवेन्यूमा ब्लान्चको गाडीमा आएर ती दुई व्यक्तिले सिल्भिया र उनी थिईन् भनेर देखेका ती महिलाको भनाइको कारण यो भयो। तर यो प्रमाणित गर्न सम्भव थिएन कि जन त्यो व्यक्ति हुन्, किनकि उसको खास विशिष्ट अलिबी थियो, जुन पुष्टि भयो।
अलेजान्ड्रा एक युवा पत्रकार र कथाको मुख्य पात्र हुन्। उनी सिल्भिया बेपत्ता भएको पहिलो वर्षको सम्झनामा एउटा लेख सिर्जना गर्ने जिम्मामा छिन्। बन्द केसमा सामान्य कामको रूपमा के शुरू भयो, उहाँ सहरमा आइपुगेपछि परिवर्तन भयो, किनकि उनको उपस्थितिले परिवार र जनसंख्यामा ठूलो तनाव सिर्जना गरेको थियो।
एलेक्स, सबैको व्यवहारबाट उत्सुक, उनको पत्रकारिता वृत्ति बाहिर आउँछ र थप अनुसन्धान गर्न निर्णय गर्दछ। नयाँ डाटाको खोजीमा, उनले धेरै व्यक्तिको अन्तर्वार्ता लिने निर्णय गरे, जनवरीबाट सुरू गरिएको, जसले उनको पहिलो नजरबाट स्तब्ध छोडिदियो, र यस्तो परिस्थितिमा उनलाई भेटेर उनी पछुताउँछन्। एलेक्स निडर बिना अनुसन्धान गर्दछ, जब सम्म उहाँ यस रहस्यपूर्ण समाधान नगरिएको अवस्थामा पुग्नुहुन्छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: वर्तमान साहित्य » साहित्य » किताबहरु » सिल्भिया ब्लान्चको अन्तिम गर्मी